Xirfadaha in Injineeriyadda madaniga ah ay tahay in laga helo dhismaha mulkiilaha - Geofumadas
Marka la falanqeynayo sida loola tacaalayo horumarinta mawduucan, toddobaadkii kowaad ee ahaa injineerka madaniga ayaa isla markiiba maskaxda ku haya; Ka dib xafladii qalin-jabinta waxaan go'aansaday inaan u safro oo aan booqdo awowgeyga oo leh fikrad ah inaan ku raaxaysto maalmo yar oo xasillooni ah. Runtu waxay ahayd in hal maalin, waxaan helay cashar ah in sanado badan ka dib, weli ma iloobin.
My awoowe ahaa dhise wastaad iyo sayidkayga ah sannado badan oo waayo-aragnimo ah, maalin ka dib markii aan dalka imid, isagu wuxuu igu casuumay inuu raaco si uu shuqulka ah in uu ahaa laga bilaabo oo wuxuu ku yidhi:
"Ha dhihin waxaad tahay injineer, oo weydii wax walba oo aad rabto inaad ogaato"
maalintaas ayaan ka bartay oo ku saabsan arrimaha ee fasalada jaamacadda ma i bar, tusaale ahaan sida la xidhiidha shaqaalaha u shaqeeyaan (Injineer-macalinka shaqada iyo wastaadyo, iyo beertiisa xidhiidhka), urur maalinta shaqada, soo dhaweynta iyo gacan ku haynta qalabka iyo qalabka, oo ka mid ah dhinacyo kale oo badan. Waxa kale oo aan bartay waxqabadka shaqada ee sahamiyaha iyo maskaxda shaqada, oo si cad u jawaabay dhammaan su'aalaha aan waydiiyay. Waxaan awooday inaan ka helno dhammaan macallimiintaan iyada oo ay ugu wacan tahay xaqiiqda ah inay u maleeyeen inaan ahay arday iyo sidaa daraadeed way farxeen inay i caawiyaan.
Marka la soo koobo, waan ogaa in maalin kasta ku bixisay in shaqada ah, waana maalin waxbarasho noqon lahaa, haddii ay gees u joojiyaan kuwa kibrana oo ahaa darajadii injineernimada iyo ogaa u helaan ixtiraamka iyo iskaashiga ee dhise sayidkii.
Dhexgalin oo si toos ah arrinta awoodaha in Engineer ah Civil waa in ay helaan shaqo sayidkiisa, waa in aan marka hore la caddeeyo waxa aynu ula jeeddaan "kartida" taas ma aha waxaan "kuwa aqoonta iyo xirfadaha qofka uu leeyahay in uu la kulmo hawlihii wax ku oolka ahaa ee loo go'aamiyay, waana sifooyinka suurtageliya in ay ka dhigaan goob gaar ah ".
Sidoo kale waa in Waxaan ognahay in dhise sayidkii "waa mas'uulka ka ah kormeerka shaqada la fuliyay by shaqaalaha kale inta lagu guda jiro fulinta dhismaha, ka dhagaaxda in shaqada la dhammeeyo" iyo hawlihiisa ugu muhiimsan ee iyaga dib u eegi kartaa link soo socda: http://www.arcus-global.com/wp/funciones-de-un-maestro-de-obra-en-la-construccion.
Haddaba, waxaan arki doonaa awoodaha weyn ee injineer sokeeye iyo gaar ahaan kuwa halkaas oo waayo-aragnimo wax ku ool ah dhise sayidkii, heleen muddo, na caawi in baaqbaaq, hagaajin iyo iyagaan ku xoogayn horumarinta sidii xirfadle u hurtaa sidii ay dhismaha.
Aqoonta aasaasiga ah: waa qaybaha ugu muhiimsan ee injineerka madaniga ah inuu ogaado kahor intaan la sii wadin shaqadiisa oo ay yihiin kuwa la helay intii lagu jiray tababarkiisa. Waa in aan caddeeynaa in qaar ka mid ah ay ku fiicnaadeen khibrad.
Aqoonta qalabka loo adeegsado dhismaha, haddii ay run tahay in fasalka dhexdiisa waxaan ku bari ku saabsan arrintan, waxaa jira dhinacyo badan oo Foreman yaqaan si fiican, sida wax aad u fudud, tayada block a la taaban karo kaliya isaga iyo taabo
Aqoonta noocyada ciidda: Sida xaqiiqda ah oo ay arkeen xayawaanno badan ayaa u oggolaanaya macmiilka, tusaale ahaan, inuu ka ogaado khibradda tayada ciidda oo aasaas u ah aasaaska.
Aqoonta ku saabsan sida ugu wanaagsan loo gaarsiiyo isticmaalka qalabka: halkan aragnimo macalinka caawin doonaa ma aha oo kaliya in sida ugu wanaagsan loo gaarsiiyo, laakiin sidoo kale sida dukaan, waa maxay tayada kala duwan iyo tayada agabka iman in ay ka shaqeeyaan, waxa ay la inta badan lagu talinayaa in shaqada qaarkood , iwm.
Aqoonta mishiinada loo isticmaalo mashaariicda dhismaha, caymiska halkan injineerka bartaan lingo loo isticmaalo by shaqaalaha si loo ogaado qalab kala duwan iyo qalab, laakiin sidoo kale ay ogaadaan sida ay u ilaaliyaan iyo qalabka dayactirka loo adeegsado dhismaha. Guinche, Retro, Jumbo, qaado, majarafad, daloolin, iwm, waxay noqon doontaa magacyada la yaqaan iyo qaar ka mid ah ma, tan iyo markii ay isla beddeshaa ku xiran dalka iyo gobolka ee shaqada la gar qaybshay.
Xirfadaha: Injirta madaniga ah waa in ay lahaataa xirfado u oggolaanaya inuu si fiican u guto hawshiisa, oo ka duwan aqoonta ay ku heleen oo keliya goobta shaqada.
Kartida ay u wada shaqeeyaan iyo isgaadhsiin amarada si fiican, iyadoo daawashada Foreman wanaagsan, injineer ka baran karaan sida ay u shaqeeyaan kooxo, iyo ku siiyo tilmaamo abaal marin iyo / ama reprimanding shaqaale.
Kartida ay u igman karo hawlaha iyo shaqada si ay u qorsheeyaan Dhismaha: inkastoo qorshaynta shaqada waa shaqo ah iyo qofka toos mas'uulka uga ah shaqada injineer ah, waa in ay leeyihiin sirdoonka dareen ku filan si ay uga wada hadlaan oo ay u falanqeeyaan waxa aad ku Dhagarteen la Foreman ah, iyo Waxaad hubaal ka heli doontaa fikrado cusub oo ku saabsan sida hawlaha maalinlaha ah loo qabto.
Kartida si loo go'aamiyo waqtiga loo baahan yahay hawl kasta: Xirfadan ma aha oo kaliya laga barto khibrad, laakiin sidoo kale waa in aan ogaanno shaqaalaha, shahaadooyinkooda, kartidooda iyo awooddooda; maaddaama ay yihiin dhinacyo hor leh oo tilmaamaya waxqabadka ah in uu fuliyo shaqo kasta; Sidaa daraadeed, kan ugu horreeya ee la tashanayo waa mulkiilaha dhismaha.
Awoodda si ay u xaliyaan dhibaatooyinka kacayaan dhismaha, at this dhibic aragnimo dacwadood oo sida xaqiiqada ah Foreman wanaagsan waa in uu leeyahay waayo aragnimo ku filan in arrintan la xiriira, sida waa in ay soo gaaray, ku noolaa iyo xalin dhibaatooyin badan oo lasoo xirayba ay wax shaqada.
Xirfadaha: Waxay yihiin natiijada aqoonta iyo xirfadda tan iyo markii uu bilaabay xirfaddiisa waxaana uu ku guuleystay in uu xoojiyo injineerka madaniga ah isaga oo kaashanaya waayo-aragnimadiisa mashaariic kala duwan.
Kooxo horseed ah oo ay sameeyeen farsamoyaqaanno iyo shaqaale: tani macnaheedu waa "hogaamiye". Injineeradu waxay u oggolaadaan hogaamiyaha shaqaalaha shaqada inay noqdaan sayid u shaqeeyaan, xoojiyaan mar kasta oo ay u adeegsan karaan arrintaan; u hoggaansami kooxdaada farsamada iyo inaad kasbato hoggaamintaada hogaankaaga, xirfadahaaga iyo daaweyn ixtiraam leh dhammaan shaqaalaha.
Go'aami khayraadka loo baahan yahay hawl kasta: halkaan waayo-aragnimada iyo aqoonta faahfaahsan ee qaababka dhismaha waa muhiim in la go'aamiyo qadarka alaabta, shaqaalaha iyo qalabka lagama maarmaanka u ah inay u hoggaansamaan waxqabad gaar ah. Tusaale ahaan in shaqada wanaagsan fahmi karo lacagta qalabka, tirada shaqaalaha iyo qalabka u baahan tahay in biyo bulukeeti ah dabaqa la taaban karo, jawaabtu waa mid ka mid ah "shaqada sayidkayga"; inkasta oo wakhti ka dib uu injineerku awoodi doono in uu u isticmaalo saxnaanta farsamo.
Shaki la'aan waxaa jira xirfad farsamo oo ah in injineerka madaniga ah uu haysto, taas oo aan ku tilmaameyno kuwa kor ku xusan, maaddaama ay yihiin kuwa laga barto jaamacadda ama lagu helo daraasado dheeraad ah; sida maareynta barnaamijka naqshadeynta, ama awood u leh isticmaalka qiimaha cutubka iyo codsiga miisaaniyadda. Dhamaan xirfadahan la soo sheegay iyo farsamooyinka waxaa hadda lagu soo koobay qaababka aasaasiga ah ee 7 ee ku jira qaabka uu yahay injineernimo waa inay lahaadaan guulo xirfadeed, kuwaas oo ah:
Karti-galin iyo karti-u-helidda is-barashada,
Waxaad aadi kartaa qoto dheer kuwan hoos ku xusan: https://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/7-habilidades-que-debe-tener-un-ingeniero-para-alcanzar-el-exito-profesional
Gabagabo waa in aynu nidhaahno in injineer sokeeye oo mustaqbalkiisa ciyaareed ee dhismaha bilaabay, sidoo kale degan ama kormeeraha, ayaa fursad weyn si ay u bartaan iyo xoojinta awoodaha muhiimka ah si ay u caawiyaan aad profile ka dhigi doontaa sida a professional guul. Waayo, waa in aragti-hoosaysiinta iyo ogahay in jaamacadda kuwaas oo loo tababaray meelaha farsamada, laakiin, si fiican loo isticmaalo, dhameysan doono waayo-aragnimo shaqo si loo baro. Waa inuu sidoo kale garowsadaa in xirfadlayaasha kale ee leh khibrad iyo aqoon dheeraad ah ay ka shaqeynayaan shaqada, oo iyaga ka mid ah waa sayidkii shaqada oo u baran lahaa isaga ugu badan.
Post Previous«Previous 14as International gvSIG Shirka: «Dhaqaalaha iyo Waxsoosaarka»
Post Next Bentley Systems waxay sameeyaan sharaf adag oo GIS ah marka ay iibsanayaan hay'addaXXUMXNext »